रुसको गल्लीमा यस्तो हुलियामा भेटिए सलमान खान, कसैले चिनेनन् !:: Mero Desh
रुसको गल्लीमा यस्तो हुलियामा भेटिए सलमान खान, कसैले चिनेनन् !
Published on: ७ भाद्र २०७८, सोमबार १२:०५
बलिउडका सुपरस्टार सलमान खानले आफ्नो अपकमिङ फिल्म ‘टाइगर–३’को सुटिङ सुरु गरेका छन् । सलमानको यो फिल्म टाइगर फ्रेञ्चाइजीको तेस्रो फिल्म हुनेछ । अहि ले ‘टाइगर–३’को सुटिङका लागि सलमान खान रुस पुगे का छन् ।
सलमान खानले ‘टाइगर–३’को लागि आफ्नो हुलिया पूरै परिवर्तन गरेका छन् । उक्त सार्वजनिक तस्वीरमा झलक्क हेर्दा सलमान खानलाई चिन्न जो–कोहीलाई मुस्किल नै हुन्छ । उनको मेकओभरमा निकै मिहेनत गरिएको सार्व जनिक तस्वरले प्रमाणित गरिसकेको छ ।
सलमानले फिल्मको लागि फिजिकल्ली पनि निकै मिहेनत गरेका छन् । उनले आफ्नो बडी साइज बढाउनका लागि निकै कसरत गरेका बताइएको छ । लिक भएको तस्वीरमा सलमान खानको शान्दार बडी देखिएको छ । त्यसोत, सल मान खानलाई शान्दार बडीका लागि चिनिन्छ ।
उक्त तस्वीरहरुलाई सलमान खानको एक फ्यान क्लबले सार्वजनिक गरेको हो, जहाँ सलमान खान रुसको गल्लीह रुमा सुटिङ गर्दै गरेका दृश्यहरु छन् । दुईदिन अगाडि मात्रै सलमान खान र अभिनेत्री क्याट्रिना कैफ आफ्नो अपक मिङ फिल्म ‘टाइगर–३’को सुटिङका लागि रुस गएका हुन् ।